Ciidamada booliska Soomaaliya oo toogtay sarkaal ka tirsanaa Al shabaab - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka sameeyay magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal ka tirsanaa amniyaadka Al-shabaab kaas oo lagu magacaabi jiray Abukar Xassan Cadde.
Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in kahor inta aysan ciidamada toogan ninkan ay isku dayeen in ay qabtaan, balse uu weeraray ciidamadii howlgalka ku jiray isagoo dilay hal askari mid kala dhaawacay.
“Ciidamada booliska Soomaaliya waxay isku dayeen inay qabtan Abukar Xassan Cadde oo Al-shabaab u yaqaaneen (Sayid Abu Kareyd) islamarkana amniyadka Al shabaab u qaabilsanaa degmooyinka Yaaqshid iyo Huriwaa, balse wuxuu dilay mid ka mid ah askartii howlgalka ku jiray midna waa dhaawacay ka hor inta aysan ciidamada toogan” ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble.
Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in ciidamada booliska ay muddo ku dabo joogeen ninkan ka tirsanaa amniyadka Al-shabaab.
Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xusay in ciidamada booliska ay horay u dileen amniyad ka tirsanaa Al-shabaab kuwaasoo la shaqeyn jiray sarkaalka la dilay.
Ciidamada dowladda ayaa magaalada Muqdisho ka wada howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoo malmihii la soo dhaafay ururka Al shabaab ay weeraro ismiidaamin ah ku qaadeen xarumaha degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag,waxana weeraradaasi ku naf wayay in ka badan 30 ruux.